Khilaaf Ka Taagan Habka Ceeymisku - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson."Muddo ayay qaadan in wax looga bedelo nidaamka ceeymiska". Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
Sjukförsäkringsreformen ligger fast
Khilaaf Ka Taagan Habka Ceeymisku
La daabacay onsdag 13 oktober 2010 kl 16.30
Wasiirka ceeymiska bulshada ee dawladda Cusub ee dhowaantan la soo bandhigay Ulf Kristersson, ayaa sheegay mar uu u warramayay idaacadda wararka ee Ekot inuu diyaar u yahay sidii dib loogu eegi lahaa nidaamka ceeymiska bulshada, hase yeeshee aan isbedello lagu sameeyaa noqon doonin kuwo sidaa u sii baaxad weyn.
- Waxay iila muuqataa in la oran karo in lagu tallaabsaday is-bedel ballaaran, dhabbadaasi aan qaadnayna tahay mid aan ku taagnaan doonno.
- Marka aan iminka leeyahay waxaan ku eegi doonnaa okiyaale si aan wax uga saxno khaladaadka yar yar ee dhacay, iyo in aan si xushmad mudan dusha u saaranno khaladaadkaa, macnaheeduna maaha inaan ka weecanay dhabbadii is-bedelka ee aannu ku tallaabsannay.
Xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ayaa dhaleeceeyey go’aanka uu ku baaqay wasiirku.
- Waa fikir aan maskaxda geli karin, sida uu sheegay af-hayeenka ceeymiska bulshada ee xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga Tomas Eneroth, mar uu warramay heeyadda wararka ee TT isagoona ula jeeday jawaabtii uu wasirrka ceeymiska bulshada Ulf Kristerssons ka bixiyay dib u habeeyn lagu sameeyo siyaasadda wasaaradda uu madaxda ka yahay.
- Waa mid xaqiiq ah i aanu (Kristersson) dhab ahaantii fahmin dhibaatooyinka ka taagan ceeymiska ee iminka jira. Haddii aanayna ruuxa u muuqan caqabadaha uu dhaliyay is-bedelkii dawladdu ku sameeysay nidaamka ceeymiska bulshada, marka waa ruux ka indha xiran dhabta, sida uu sheegay Tomas Eneroth.
- Waxay iila muuqataa in dawladdu si deg-degsiimo ah wax uga bedesho nidaamka ceeymiska si aannu uga bad-baadno in sannadaha foodda innagu soo haya ey dad badani bannaanka kaga dhacaan nidaamka ceeymiska.
Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in taageero ballaaran loo geeysto hoowlaha barxaaminta dadyoowga xannuunsan.
Xisbiyada Dhexe, Shacabka iyo Kristendimoqoraadka ayaa dhammaantood soo jeediyay in nidaamka ceeymiska bulshada sida ugu dhakhsiyaha badan dib loogu noqdo sidii wax looga bedeli lahaa.
Waana xisbiyo ey xulufo yihiin xisbiga Mudaraatka iskuna baheeysteen awoodda talada dalka.
Baahi deg deg ah ayaa loo qabaa is-bedel:
Birgitta Rydberg, ahna madaxa caafimaadka ee gobolka Istockholm, islamarkaana ka tirsan xisbiga Shacabka ee Fp, ayaa sheegtay in loo baahan yahay sida ugu dhakhsiyaha badan in wax looga bedelo nidaamkan maadaama bay tiri ey jiraan dadyoow uu nidaamku caqabadeeyay, waan deg deg xaaladdu.
Dood Ka Dhalatay Nidaamka Ceeymiska Bulshada